Operating Manager | Authentic Group ﻿
•	စက်ယန္တရားများ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အဓိက လုပ်ဆောင်ရမည်။
•	Maintenance ပိုင်းလည်းလုပ်ဆောင်ရမည်။
•	နယ်ဆိုဒ်များသို့ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ အား ပ်ို့ဆောင်ခြင်း ချိန်းပြောင်းခြင်းများ အား စီမံခန့်ခွဲပေးရမည်။
•	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်ယန္တရားများ ဋ္ဌားရမ်းမှု၊ ထိန်းသိမ်းစောင့်ေ၇ှာက်မှူ ၊ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်ရမည်။
•	Must have4years experiences in operation field.
•	Must have4years experiences in Construction field.
•	Total 8 years experiences in related field.
•	Age 30 ~ 45 years old
Company Industry: Operating Manager
Operating Manager Construction & Property jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Authentic Group Construction & Property jobs Construction & Property jobs Operating Manager Jobs in Myanmar, jobs in Yangon